Ilu 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Mara ihe ma tụkwasị Jehova obi (1-12)
Jiri ihe ndị kacha mma na-efe Jehova (9)
Amamihe na-eme ka mmadụ nwee obi ụtọ (13-18)
Amamihe na-echebe mmadụ (19-26)
Na-emeso ndị ọzọ ihe otú dị mma (27-35)
Meere ndị ọzọ ihe ọma ma ọ bụrụ na ị ga-emeli ya (27)
3 Nwa m, echefula ihe m na-akụziri gị,*Jiri obi gị niile na-edebe iwu dị iche iche m na-enye gị, 2 N’ihi na ha ga-eme ka ị dịtee ndụ aka,Meekwa ka obi ruo gị ala.+ 3 Akwụsịla ịhụ ndị ọzọ n’anya,* akwụsịkwala igosi na ị bụ onye e kwesịrị ịtụkwasị obi.*+ Yiri àgwà ndị a n’olu gị ka ihe olu. Dee ha n’obi gị.+ 4 I mee ya, ihe gị ga na-amasị ma Chineke ma mmadụ,Ha ga-ewerekwa gị ka onye na-aghọta ihe.+ 5 Jiri obi gị niile tụkwasị Jehova obi,+Atụkwasịla amamihe gị obi.*+ 6 N’ihe niile ị na-eme, chọpụta ihe bụ́ uche ya,+Ọ ga-emekwa ka ihe gaziere gị.*+ 7 Amala ihe n’anya onwe gị.+ Tụọ egwu Jehova, hapụkwa ihe ọjọọ. 8 I mee otú a, ahụ́ ga-adị gị ka à gwọrọ gị ọrịa,Ime ahụ́* ga-agbasikwa gị ike. 9 Sọpụrụ Jehova ma nye ya ihe ndị kacha mma i nwere,+Ha na mkpụrụ mbụ* nke ihe ọ bụla ị kụrụ n’ubi.*+ 10 Ihe ga-ejuzi n’ebe ndị ị na-akwasa ihe,+Olulu ebe mmanya ọhụrụ ị zọchapụtara na-asọba ga-ejukwa n’ọnụ. 11 Nwa m, ajụla aka ná ntị Jehova na-adọ gị,+Eledakwala mba ọ na-abara gị anya,+ 12 N’ihi na ọ bụ ndị Jehova hụrụ n’anya ka ọ na-abara mba,+Otú nna si abara nwa ya ọ hụrụ n’anya mba.+ 13 Onye nwetara amamihe+Na onye na-aghọta ihe na-enwe obi ụtọ. 14 Inweta amamihe dị mma karịa inweta ọlaọcha. Inweta ya* dịkwa mma karịa inweta ọlaedo.+ 15 Ọ bara uru karịa nkume kọral.* E nweghị ihe ọ bụla ọzọ ị chọrọ inweta a ga-eji tụnyere ya. 16 Ogologo ndụ dị n’aka nri ya. Akụnụba na ùgwù dị n’aka ekpe ya. 17 Ịga n’ụzọ ya na-eme mmadụ obi ụtọ,Ụzọ ya niile bụkwa ụzọ udo.+ 18 Ọ bụụrụ ndị na-ejide ya aka osisi nke ndụ,A ga-akpọkwa ndị na-ejidesi ya aka ike ndị na-enwe obi ụtọ.+ 19 Jehova ji amamihe tọọ ntọala ụwa.+ O ji nghọta mee ka eluigwe kwụsie ike.+ 20 O ji amamihe ya kewaa mmiri miri emi,Na-emekwa ka mmiri si n’ígwé ojii na-ezo obere obere.+ 21 Nwa m, elegharala ha* anya. Jidesie ezigbo amamihe aka ike, na-echebakwara ihe echiche nke ọma. 22 Ha ga-eme ka ị* dị ndụ,Ha ga-abụkwa ihe ị ga-eji chọọ olu gị mma. 23 Mgbe ahụ, e nweghị ihe ga-eme gị mgbe ị na-aga n’ụzọ,Ụkwụ gị agaghịkwa akpọ n’ihe ọ bụla.+ 24 Ụjọ agaghị atụ gị mgbe i dina ala.+ Ị ga-edina ala hie ụra, ụra ga-atọkwa gị ụtọ.+ 25 Ị gaghị atụ ọdachi ọ bụla na-abịa na mberede ụjọ,+Ị gaghịkwa atụ ụjọ mbibi a ga-ebibi* ndị ajọ omume.+ 26 N’ihi na Jehova ga-eme ka obi sie gị ike.+ Ọ ga-eme ka ọnyà ghara ịma gị.*+ 27 Ajụla imere ndị i kwesịrị imere ihe ọma ihe ọma+Ma ọ bụrụ na i nwere ike inyere ha aka.+ 28 Asịla onye agbata obi gị: “Lawa; e mechaa, gị abịa. M ga-emere gị ya echi,”Ma ọ bụrụ na i nwere ike imere ya ihe ahụ ozugbo. 29 Akparala onye agbata obi gị nkata ọjọọ+Mgbe o chere na gị na ya bi n’udo. 30 Esesala mmadụ okwu+Ma ọ bụrụ na e nweghị ihe ọjọọ o mere gị.+ 31 Enwerela onye tigbuo zọgbuo anyaụfụ,+Akpakwala àgwà ka ya. 32 N’ihi na Jehova kpọrọ onye aghụghọ asị,+Ma ya na onye ezi omume na-abụ ezigbo enyi.+ 33 Jehova na-abụ ezinụlọ onye ajọ omume ọnụ,+Ma ọ na-agọzi ezinụlọ onye ezi omume.+ 34 Ọ na-akwa ndị na-akwa emo emo,+Ma ọ na-emere ndị dị umeala n’obi amara.+ 35 A ga-akwanyere ndị ma ihe ùgwù,Ma a ga-akpụ ùgwù ndị nzuzu n’ala.+
^ Ma ọ bụ “iwu m.”
^ Ma ọ bụ “igosi ndị ọzọ ịhụnanya pụrụ iche.”
^ Ma ọ bụ “onye eziokwu.”
^ Na Hibru, “Adaberela ná nghọta gị.”
^ Na Hibru, “ka ụzọ gị dị larịị.”
^ Na Hibru, “Ọkpụkpụ.”
^ Ma ọ bụ “ihe kacha mma.”
^ Ma ọ bụ “ihe ọ bụla ị kpatara.”
^ Ma ọ bụ “Irite ya n’uru.”
^ Ya bụ, àgwà Chineke ndị e kwuru okwu ha n’amaokwu ndị bu nke a ụzọ.
^ Na Hibru, “oké ifufe ga-efekwasị.”
^ Na Hibru, “ụkwụ gị.”